Ọrịa ahụ metụtara ọrịa ahụ, ihe ngosipụta nke ihe eji eji ngwa ngwa eji eme ihe Shanghai agaala kemgbe ihe karịrị afọ abụọ. Teknụzụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, akụrụngwa ọhụrụ na usoro dị iche iche dị mkpa iji gosipụta ya n'ahịa ma nweta nzaghachi ahịa; n'otu oge, mgbe mmetụta nke ...
Emume Mmeghe nke BKWELL JWELL DWELL Ofesi Ofesi na Thailand. Ndị enyi nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ na China na Thailand sonyere na mmemme mmeghe nke BKWELL JWELL DWELL Ofesi Ofesi. Ndị isi nke ...
Akụrụngwa Uru 1). Ahụmịhe ọkachamara na-emegharị, ahụmịhe dị mma, arụmọrụ kwụsiri ike, dabara adaba maka oke ike; 2). High nkenke nyo usoro gbazee mgbapụta usoro, na; nso-akaghị akara extrusion mgbali stabara ...
[Ajụjụ ọnụ] Jwell mgbochi ọrịa na mmepe tupu ugbu a Meltblown na-abụghị kpara extruder dị ụkọ
COVID-19 na-ada ụda. Kedu ka akụrụngwa roba na plastik na-arụpụta si egbo mkpa nke igbochi ọrịa na ịchịkwa ọrịa iji hụ na ọkọnọ na-achọ? Maazi Wang Liang, onye isi njikwa Shanghai Jwell Extrusion Machinery Co., Ltd. nabatara nleta isiokwu nke "CPRJ" / Ad ...
Pc Mpempe akwụkwọ, N'èzí Ngwa, Vkwanyere Corrugated Board, Pee Pp Osisi-Plastic Ft Extrusion, Vkwanyere Multi Layer Okpomọkụ mkpuchi Corrugated Board, Pc oghere mpempe akwụkwọ,